भाग्ने कोरोना संक्रमितलाई सुरक्षाकर्मीले अब सिधैं गोली हान्न सक्ने, पायो यस्तो अधिकार ! ल है संक्रमित साथीहरु विचार गरम कडा निर्णय भएछ नेपालमा – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/भाग्ने कोरोना संक्रमितलाई सुरक्षाकर्मीले अब सिधैं गोली हान्न सक्ने, पायो यस्तो अधिकार ! ल है संक्रमित साथीहरु विचार गरम कडा निर्णय भएछ नेपालमा
भाग्ने कोरोना संक्रमितलाई सुरक्षाकर्मीले अब सिधैं गोली हान्न सक्ने, पायो यस्तो अधिकार ! ल है संक्रमित साथीहरु विचार गरम कडा निर्णय भएछ नेपालमा
कोरोना संक्रमित भागेमा सुरक्षाकर्मीले सिधैँ गोली समेत हान्न पाउने अधिकार पाएका छन् । पर्सामा बुधबार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले सुरक्षाकर्मीहरूलाई अस्पतालबाट भाग्ने कोरोना संक्रमितलाई गोली हान्ने अधिकार दिएको हो।
सो निर्णयको बारेमा पर्साका एसपी गंगा पन्तले पुष्टि गरेकी छिन्। ुहिजोको बैठकले हामीलाई अधिकार दिएको हो, एसपी पन्तले भनिन्। गत बुधबार वीरगञ्जको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालबाट शौचालय जाने बहानामा दुई जना संक्रमित भेन्टिलेसन फोडेर भागेका थिए।
प्रहरीले उनीहरूलाई सोही दिन पक्राउ गरेको थियो। उक्त घटनालाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रले अस्पतालबाट भाग्न नदिन यस्तो निर्णय गरेको हो। सुरक्षाकर्मीलाई संक्रमित भागेमा नियन्त्रण लिन आवश्यकता अनुसार बल प्रयोग गर्ने तथा गोली समेत चलाउन पाउने अधिकार दिने निर्णय गरेको हो।
उक्त बैठकको अध्यक्षता प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुकुमार कार्कीले गरेका थिए। बैठकमा नारयणी अस्पतालका डा। मदन उपाध्याय, प्रमुख सेनानी मदनजंग राणा,प्रहरी उपरीक्षक गंगा पन्त, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक दिपेन्द्र कुँवर लगायत सहभागी थिए।
बिहानै पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गरि आजको राशिफल पढ्नुहोस् ।
पीसीआर टेष्ट गरेर फर्किँदा बाटोमै एकजनाको निधन
सियोनाको उपचारमा लोकप्रिय गायिका रचना रिमालको २० हजार सहयोग
लकडाउनमा पोखराका विद्यालयमा अनलाइनबाट पढाइ